Taageero – Iskaa U Noqoshada
Toos qoraalka ugu gudub
Iskaa U Noqoshada
Waxaad heli kartaa taageero iyo caawimaad dhaqaaleba
Finland ma waxaad ku joogtaa sharci la’aan? Ma ku fekereysaa inaad dib ugu laabato dalkaagii hooyo?
Waaxda Socdaalka iyo ururka caalamiga ah ee qaabilsan arrimaha dadka muhaajiriinta ah ee loo yaqaan IOM, ayaa waxaa ay caawiyaan dadka sida khiyaarkooda ah dib ugu laabanaaya dalkooda. Waxyaabaha lagaa caawinaayo waxaa ka mid ah diyaarinta safarka, tigidka diyaaradda iyo raadinta dukumintigii lagu safri lahaa. Waxaa kaloo aad heli kartaa taageero ku saabsan la qabsiga labaad ee waddanka.
Qaybta 1-aad: La soo xiriir
Waaxda Socdaalka ayaa kaala talinaysa, islamarkaana kaa caawinaysa codsashada dib u laabashada khiyaarka ah.
Adiga ayaa dooran kara qaabka ugu wanaagsan ee aad noola soo xiriir karto:
In aad soo wacdo ama aad farriin ku soo dirto lambarka WhatsApp-ka: 050 413 8625
Ama in aad farriintaada ku soo dirto iimeylka ah: return@migri.fi
QAYBTA 2-aad: Falanqeynta
Waaxda socdaalka ayaa falanqeyneysa codsigaaga. Go’aankaas waxaa si guud ahaan ah tixgelinta loo siin doonaa xaaladdaada nololeed. Sidoo kale waxyaabaha tixgelinta la siin doono waxaa ka mid ah xaaladdaada caafimaad iyo tan qoyskaaga
Taageerada laqabsiga labaad ee dalka waxaa ay Waaxda socdaalku ku bixisaa lacag caddaan ama kaash ah (käteisenä) ama caawimaadda waxtarka kale ah ee aan lacagta aheyn (hyödyketukena). Caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta aheyn waxay noqon kartaa, taageerada ku saabsan helitaanka guri, waxbarasho ama shaqo, amaba tusaale ahaan asaasid ganacsi.
Waaxda socdaalka ayaa waxaa ay booliska ka soo hubsanaysaa in dib u laabashada khiyaarka ah ay suurtaggal tahay iyo inkale. Kahor inta aan la gaarin go’aanka caawimaadda ah, waa in aad iska baajisaa ama kansashaa codsigaagii sharciga degganaanshaha iyo racfaankiiba.
Markii go’aanku uu diyaar noqdo, Waaxda socdaalka ayaa go’aankaas u direysa ururka IOM, waxaana uu ururku bilaabayaa abaabulkii dib u laabashada.
QAYBTA 3-aad: Dib ugu laabashada dalkaaga
Ururka IOM ayaa ku siinaya talooyinka ku saabsan dib u laabshada oo ku qoran luqado kala duwan, waxaana ay kuu qabanayaan ballanta safarka aad ku aadi lahayd dalkaaga hooyo. Haddii aadan baasaboor lahayn, waxaa lagaa caawinayaa sidii aad dukumintiga lagu safro uga heli lahayd safaaradda dalkaaga. Haddii ay jirto dhibaato caafimaad oo adiga ku heysa, tixgelin ayaa la siin doonaa marka la sameynaayo abaabulka dib u laabashada.
Haddii laguu oggolaaday caawimaadda dhaqaale ee lacagta caddaanka ama kaashka ah iyo waxtarka kale ee aan lacagta aheynba, waxaa qofka weyn la siinayaa lacag caddaan
ama kaash ah oo dhan 200€ iyo ilmaha yar oo ah 100€
Macluumaadka ku saabsan halka aad kala xiriiri karto, cidda ku siineysa caawimaadda dib u laabashada ee markaad tagto dalkaaga hooyo.
Haddii aad dooratay lacagta caddaanka ama kaashka ah (käteisenä), Waxaad la xiriirtaa xafiiska IOM, marka aad dib ugu laabato dalkaaga hooyo. Iyaga ayaad ka heleysaa inta ka dhimman lacagta caawimaadaada.
Haddii aad dooratay caawimaadda waxtarka kale ee
aan lacagta aheyn (hyödyketuki), waxaad la xiriirtaa xafiiska aan wadashaqaynta leennahay ee ku yaalla dalka aad joogto. Marka aad dalkaaga dib ugu laabato, waxaad sameyneysaa qorshaha ku saabsan sidii aad u isticmaali lahayd caawimaaddaas, waxaana caawimaadda ku heleysaa qaab adeeg ah ama iyadoo alaab ahaan ah.
Ururka IOM ayaa ku caawinaya inta aad joogto garoomada diyaaradaha ee kala duwan, waxaana ay kaa caawin doonaan wixii safarkaaga ku saabsan illaa iyo inta aad ka gaareyso magaalada dalkaaga hooyo ee aad deggan tahay.